Waxyaabaha la sameeyo On Long Tareen Safarada | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waxyaabaha la sameeyo On Long Tareen Safarada
A tareen kortaan na ciidamada ay uga maqsuudeen, fiirsadaan daaqadda oo dibadda ah iyo maqsuud raaxada qaadashada waqtigeena. Safrida waa xiiso leh, laakiin mararka qaarkood waxay qaadan kartaa ilaa tamarta oo dhammuba aannu marno, a safar tareen dheer waa fursad in ay xidhi doonto iyo unwind. Samee ugu baxay safarkaaga - halkan waa wax aannu ugu sareysa inay sameeyaan socdaalay tareen dheer in la damaanad qaado socotada kasta geeyo nasasho iyo raaxo.
Dhegayso music inta aad qaadanaysid a Safarada tareen dheer
Ku rid on headphones iyo hoos halka dhegaysiga muusikada aad ugu jeceshahay. Ma jiro hab ka fiican in ay ku raaxeystaan ​​muuqaal ah picturesque. Is daji oo soo jeeda ee la soo dhaafay rush muuqaalka qurxoon sida aad dhagaysan fanaaniinta aad ugu jeceshahay.
Baro luqada cusub
Waa maxay sababta aan loo horumariyo xirfadaha cusub oo ku saabsan safar? Haddii aad u safrayso dal in ku hadla luqad oo kala duwan, a safar tareen dheer waxay bixisaa fursad ay ku yar erayo iyo odhaaho qaado.
Waxaa wanaagsan in la ogaado waxyaabaha aasaasiga ah ee af kasta oo markii ay booqaneysay waddan shisheeye. Nasiib wanaag, waxaa jira apps badan iyo Nayroobi aad kala soo bixi kartaa in dalab koorsooyinka ka mid yihiin Isbaanish caan ah, Jarmal, Talyaani, iyo kuwa kala afka English.
Reading waa ku weyn yahay, waayo, nasashada ee had iyo jeer waa hab wanaagsan oo noqotay markii ugu. Long saacadaha shaqada iyo nolosha mashquul macnaheedu noqon karaa waqti yar for reading, sidaas ah safar tareen dheer ka dhigan tahay fursad ay ku boodaan aad buug ama eBook. Haddii aad dareensan tahay caajis iyo rabto qof inaad yeeshaan akhriska kuu, maqal-kitaab kale oo weyn.
Iyada oo laptops, iPads, iyo casriga ah ee aad qubo, waa ay fududahay si aad u hesho madadaalo saarnaa. Haleesho on your taxane telefishan jecel ama daawadaan movie in aad ahayd u ​​doonaysa si aad u daawato.
Haddii ay jirto wifi heli karaa ama ma, waa fikrad wanaagsan inaad ka soo dejisan show ama movie aad qorshaynayso inaad daawato ka hor safarka. Haleesho on aadka u jeclaa aad sheekooyinka ku-screen iyo ka hor inta aadan ogaan, aad noqon doontaa meesha aad u socoto.
Waa sahlan tahay si ay u dareemaan daal iyo caajis inta lagu guda jiro safar tareen dheer. Ka dib markii tareen uu saarnaa saacado fadhiya, waxaa muhiim ah in fidin lugaha marka ay suurto gal. si makhaayadda socod A gaaban kaa caawin doona inaad si ay u isticmaalaan waqtiga iyo inay dareemaan buuxin. Gawaarida gawaarida gawaarida makhaayadda, fiiri muuqaalka oo wuxuu ku raaxaysan macmacaan qaar ka mid ah la sharaabka ah ee aad dooratay
Kulmo dad cusub oo ku saabsan Safarada tareen dheer
Ku safrid tareen noqon kartaa a waayo-aragnimo bulshada. Kulanka dad cusub tareenada waxaa ka hawl yar ka badan hababka kale ee gaadiidka. Si ka duwan diyaarad, aad qabto xorriyadda ay ku dhaqdhaqaaqi oo ku lug leh safarka ah oo kale. Waxaa soo jiidasho leh waxa aad baran kartaa dad kale iyo sheekooyin ay – la hadal oo ku saabsan nolosha, shaqada, oo kobci shabakadaada. Ask the person next to you about the book they’re reading, u soo bandhig macaan, ama si fudud u bilow wadahadal ku saabsan caga ay u safraya. Waxaa la marayo wada hadalka aad leedahay halka safraya Europe tareen oo abuuri xusuus waarta.
Isu diyaari Safarada soo socda aad tareen dheer
Sodcaalladoodii tareen dheer mararka qaar waa waqti kaliya ee is dajiyaan inta aad safar. Waxa ay noqon kartaa fursad fantastik ah si aad u dib u shidaal qaadasho iyo diyaariyaan caga aad dooratay. Cab biyo fara badan, cun xoogaa cunno ah, oo hadday suurogal tahay, hurdo. Adigoo isticmaalaya safar tareen dheer si caqli ah kaa caawin doona inaad si ay u dareemaan qaboobay iyo tamaraysan - oo diyaar u ah meesha aad u socoto ee soo socota.
Maxaad samayni oo aad safar tareen dheer? Noo sheeg by na Tweets at @SaveATrain! , Waxaad ka heli kartaa channels our bulshada kale ee ku saabsan Saveatrain
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
longtrainjourneys tareen safarka safarka